Iyo yechokwadi nyaya yezvivakwa - Afrikhepri Fondation
Chipiri, Gumiguru 19, 2021
Shanduko yePfungwa - Chinyorwa (2015)
Tarisa Malcom x (1993)
Kuverenga: 4 mins
Liye midzi yebudiriro, tsika, sainzi, tekinoroji uye chinamato hazviwanikwe kuGreek, asi muvatema Egypt uye Nubia-Kush. Kubva muna 10.000 BCE kusvika muna 1500, vanhu vatema ndivo vaive pamberi mukusimudzira sainzi, tsika nemagariro.
Mamwe eaya maSainzi uye matekinoroji aive epamberi zvekuti nyaya dzemuchina wekubhururuka uye nekugadzirwa kwemichina yepamusoro zvakapfuudzwa kuburikidza nemagwaro ekare. Gare gare budiriro dema dzakadai saKhemet neMali dzakayedza nekugadzira sainzi dzakasiyana siyana nematekinoroji senge chemakemikari nesainzi yekuvhiya. Mazana amakore apfuura, veVanhu VemaEgipita vaive vatogadzira pfuti yekushandisa mutemberi uye muzvikoro zvakavanzika.
Iyo yemasvomhu uye nyeredzi sayenzi inodiwa kune epamberi matekinoroji seaya anoshandiswa muchadenga tekinoroji nemaindasitiri zvakatanga kutangwa nevatema muKhem (Egypt) neKush (Sudan). Aya maSainzi epamberi uye matekinoroji akazoendeswa kumaSumerian, maBabironi, maElamite (mabviro ebudiriro yevatema), maGiriki, vaHeberu, vaRoma nemaArabu.
Muchokwadi, vaive vatema veSabeans vekuSouth Arabia vakagadzira budiriro yekutanga muArabian Peninsula, zviuru zvemakore pamberi pekuonekwa kwevaBedouin maArabu.
Sayenzi yekurapa yakatanga muKhemet (yekare nhema yeEjipitori) uye yakazotungamira maGreek kumharidzo yaHippocrates, musimboti wemishonga yazvino. Aya maSayendisiti ekare eAfrica akateedzerwa nemaGreek nevamwe kubva mumagwaro epapyrus ekare (Rhind, Smith, nezvimwe…).
Kuma AD 711 apo maMoor, vanhu vatema vechiMuslim vemuAfrica, vakapinda muEurope, vakaunza sainzi, tekinoroji, budiriro nedzidzo ikoko uye vakaburitsa maEuropean muNguva yerima.
Vatema maMoor vakaunza budiriro kuSpain, kumaguta eToledo, Seville neCordoba. Aya mataundi akave nzvimbo dzesainzi netsika, uko maEuropean nevamwe vakadzidza sainzi nyowani, hunyanzvi uye matekinoroji. Izvi zvakatungamira kuEuropean Renaissance makore mashoma gare gare. MaBlack Moors akanyatso kuunza hunyanzvi, zvivakwa, sainzi, mushonga, kuchengetwa kwemhuka uye nedzimwe nzira dzekucheka kuSpain nekuEurope yese. Ichi ndicho chakakonzera kwakatungamira kuEuropean Renaissance.
Ivo vekuEurope vakadzidza hunyanzvi hwehunyanzvi kubva mukugadzirwa kwepfuti nezvombo.
Vanhu vemuAfrica, uye vatema muIndia, vakave nezviuru zvemakore emipiro mikuru mutsika nepasirose.
Kubva panguva yekutapa kweRoma kweEuropei kutenderedza 400 BCE kusvika kuma1200, zhinji dzekuchamhembe nekumadokero kweEurope dzaive padanho rehutsinye. Makoroni eRoma nemaguta akavakwa nemaRoma ndiyo chete nzvimbo dzechinyakare tsika.
Ukuru hwemauto eEuropean hwakakonzerwa nekuunzwa kwepfuti muEurope kubva kuChina kuburikidza nemaArabu vakaita basa rakakura mukusimudzira maEuropean kusvika padanho rekukunda uku kwemauto. Kubatsira uku kwakaita kuti kukolonialism uye kukundwa kwemamwe mauto eAfrica kuve nyore kupfuura munguva dzekare. VaEurope pavakarwa nebakatwa nepfumo vachirwisana nebakatwa nepfumo, kukunda kwavo kumaAfrica kwaive kushoma. Semuenzaniso, Hannibal, akakunda mauto eRoma nevarume zviuru gumi nezvishanu uye akatonga Italy kwemakore mazhinji.
Nyika dzakaita sevaZulu, Mossi States, Ashanti, Dahomians, Ethiopia, uye mamwe maHerrerros akakunda maEuropean muhondo nehondo dzinoverengeka.
Vatema ndivo vakatanga vagadziri vezvikoro zvakabatsira kuunza nyika mune yehunyanzvi zera. Masvomhu, fizikiki, nyeredzi, kuvaka matombo uye zvidhinha, simbi ...
Naizvozvo, kunyangwe hazvo vanhu verudzi rwekuEurope vakaita shanduko mumatekinoroji ekare uye zvigadzirwa zvekare, senge maroketi, tekinoroji yemakomputa, aerodynamics nezvimwe zvakadaro, mafomula ekutanga uye zvimiro zvekare zvaigadzirwa. nevaAfrica neChina. Semuenzaniso, vanhu vemuAfrica vakagadzira iyo binary system iyo ichiri kushandiswa muchimiro cheYoruba uye yakateedzerwa nemasayendisiti eGerman uye yakashandiswa kuchirongwa chekomputa. Mazhinji mafomula ekare e trigonometry, calculus uye fizikisi pamwe nemakemikari (Khem zvakavanzika) zvakabva mukuwanikwa kwesainzi kwevatema muEjipitori neNubia-Kush.
Imhotep, baba vekurapa. Imhotep aive zvakare chiremba wekutanga wepasirese uye akanyora mabhuku mazhinji nezvekurapa. Akanga ari mugadziri mukuru uye ndiye akatanga kushandisa freestone mukuvakwa kwenzvimbo dzakawanda dzekuWestern Europe zvesainzi kana kuti makopi ezvakawanikwa kutanga zvevaAfrica neChina zvakashandiswa panguva yezana remakore rechi16 kusvika kumakumi maviri. Yakanga iri panguva ino yakakosha apo zvimwe zvakawanikwa zvikuru zvesainzi uye tekinoroji uye zvigadzirwa. Asi izvi zvakawanikwa uye zvigadzirwa zvaive uye zviri kungogadziridza pane zvakawanikwa zvekare zvakaitwa nemaAfrica, maChinese neBlack Kushite maArabu.
Semuenzaniso, pfuti yakagadzirwa nevaIjipita vekare nevaNigeriya vaishandisa kola nut kugadzira pfuti. MaChinese vakaisazve uye vakashandisa fireworks uye zvinoputika.
Simbi yakagadzirwa nevanhu vemuAfrica muTanzania yekare, uko yekare koni-yakaita kunge mhepo inoputika ine mvuto ichiripo nanhasi uye ichiri kushandiswa. Iyo hydraulic pombi yekusimudza mvura uye kudiridza yakagadzirwa nevaAfrica muEjipitori.
Mukadzi weAfrican American anodzidzisa maNASA
Togolese inoshandisa printer 3D nehupfumi hwemagetsi
Batsira kusimudzira ino saiti nekugovana peji ino
Kana iwe uchida kuverenga zvese zvinyorwa, iwe unofanirwa kugovera saiti kamwe. Ndatenda
Iwindo rinozvivhara otomatiki mumasekondi e13